Brunei: ‘Efa Manakaiky Ny Fanivànana Ny Aterineto Mihisatra’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2013 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Català, বাংলা, English
Mitaraina noho ny fidirana aterineto meda sady tsy azo antoka any amin'ny fireneny ireo mpampiasa aterineto ao Brunei.
Manoratra ho an'ny The Brunei Times, nanonona fandalinana nataon'ny Sehatra Fiadian-kevitra ho an'ny Toekarena Eran-tany i Shareen Han, izay nametraka an'i Brunei ho iray amin'ireo manana fidirana aterineto lafo sanda indrindra any Azia Atsimo-Atsinanana. Nefa maro amin'ireo mpampiasa aterineto ao Brunei no mahatsapa fa ratsy ny tolotra aterineto azon'izy ireo raha toa ka midangana be kosa ny sarany aloany.
Tamin'ny alàlan'ny Twitter, nametraka ity fanontaniana ity ny “The Brunei Times”:
Afa-po amin'ny tolotra Aterineto aty #Brunei ve ianao?
Hetsika tweetup iray tany Brunei. Anisan'ireo mpampiasa media sosialy mafana fo indrindra ao Azia ireo teratany avy any Brunei. Sary avy ao amin'ny pejy Flickr an'i Reeda
‏Saika fitarainana momba ny aterineto meda omen'ireo mpamatsy “telco” telo goavana indrindra ao amin'ny firenena avokoa ireo valiny azo. Nanohatra ilay fihisatry ny aterineto tamin'ny fanivànana mihitsy aza i @nadiebytes:
Tsia! Ny Aterineto dia manome fidirana tsotra aminà fahalalana tsy hita lany. Ny aterineto mihisatra dia tahàka ny fanivanana.
Ireto misy tsikera mitovitovy momba ny aterineto mihisatra any Brunei:
@ZeekCrazy Heveriko fa na ny voalavo aza tsy faly.
@janetlivetravel Tsia! 2013 izao. Tokony tsindry tokana avy aminà ratsan-tànana fotsiny dia azo ny Aterineto, teknolojia, fahalalana sy ny media sosialy. MEDA LOATRA
@masruuuuur Miezaka mikaroka olona AFA-PO
‏@almstfrsh tsy mendrika ny vola aloanay. Mitongilana. Tsy marin-toerana. Mbola ilaina tohizako ve?
‏@AmeerahIsa TSY FALY amin'io aho, tena marina e. Ny tiako ambara dia izao, mandoa vola ho anà mbps izahay, nefa ny hafainganana tsy mifanakaiky amin'izay naloanay akory.
@_hakims tena mandiso fanantenana.. na ny ray aman-dreniko aza mitaraina.. miala tsiny #workitout
@ongscw Tokony hasiana fanadihadiana ny mikasika ireo fahatapahan'ny tolotra isanandro. Aleoko mifidy Aterineto MEDA toy izay TSY MISY mihitsy mandritra ny tontolo andro.
@Aliffen41 Mbola lavitra dia lavitra ny làlana.
@bobby_trisyia mankasitraka fa tsy afa-po..meda sady lafo
Araka ny tatitra iray, manana mpampiasa aterineto 200.000 i Brunei raha kely indrindra, izay isan'ireo mafana fo indrindra amin'ny fampiasana ny media sosialy ao Azia. Na izany aza, 56 isanjaton'ireo teratany ao Brunei monja no mampiasa aterineto.
Misy ny sasany amin'ireo mpampiasa aterineto no afa-po ihany amin'ny hatsaran'ny aterineto ao amin'ny firenena:
@AnwarOmarAli eny tena afa-po.
@berrymerlina hafainganana, eny! Tsy misy ambara mikasika ny halafony noho ny vahoaka & fifaninanana, tsy tahaka ireo firenena hafa
@Yunn_ha na misy fivoarana be aza eo amin'ny hafainganana, tsy ho afa-po mihitsy isika. Haha #sobrunei
@oxba 6 taona lasa izay, tsy nisy ny 3G ary 256kbps ny hafainganan'ny ADSL . 10 taona lasa izay, tsy afaka nampiasa aterineto tamin'ny findaiko akory aho. Afa-po aho.
Na talohan'ny famoahana tao amin'ny ‘The Brunei Times’ ilay lahatsoratra momba ny kalitaon'ny aterineto tao amin'ny firenena aza, efa nitaraina elaela momba izany ireo teratany ao Brunei:
@Natterulala Ny aterineton'i Brunei no antony voalohany mahatonga ireo teratany ao Brunei mararin'ny Tosidrà sy ny rarin-tsaina.
@AzizHarun212 OMG tena hain'ny aterineton'i Brunei mihitsy ny mampitroatra ny vahoaka
Manamarika i Elliop fa tsy nivoatra ny hafainganan'ny aterineto tany Brunei:
Tsy fantatro ny aminao fa raha ny momba ahy dia manontany tena aho hoe maninona amin'izao andro sy taona izao izay tsy isaina amin'ny isa iray intsony ny hafainganam-pandeha fa 10 na 100 Mbps. Tsy nisy fiovàna loatra ny aterineton'i Brunei tanatin'ireo taona maro, ary taraiky lavitra izy mihoatra ny ambin'izao tontolo izao.
Nisy fanangonan-tsonia natao mba hangatahana valinteny momba ny fihisàran'ny aterineto ao Brunei:
Izahay vahoakan'i Brunei dia te-hahafantatra:
• Maninona no meda be tahaka izao ny aterineto aty Brunei?
• Maninona no tsy azo antoka izany aterineto izany?
• Rahoviana no hivoatra ny aterineto ka azo atokisana.
Mihevitra i Joe King hoe nahana no tsy misy mamoritra ireo telcos mba hampivoatra ny tolotra:
Ny olana dia manjaka tokana izy ireo amin'ny varotra aty, ka tsy poritra hanome antsika izay ilaintsika ry zareo. Iza no afaka hitodihantsika mba hahazoantsika tolotra aterineto tsara kalitao? Ny hitango ny volantsika ihany no mahamaika azy ireo